अञ्चल अस्पतालमा मोबाईलको उज्यालोमा उपचार! :: सुजिता कार्की :: Setopati
अञ्चल अस्पतालमा मोबाईलको उज्यालोमा उपचार!
नारायण खड्का दाङ, असोज ८
राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरमा विद्युत नहुँदा मोबाईलको उज्यालोले उपचार गर्नु परेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
अस्पताल हातामा रहेको ट्रान्सफर्मरमा चट्याङले क्षति पुर्‍याएपछि अस्पताल विद्युत विहिन बनेको छ । विद्युत नुहँदा अक्सिजन उत्पादन र एक्सरे जस्ता सेवाहरू ठप्प भएका छन् । जसले गर्दा सामान्य प्रकृतिका बिरामीहरूलाई समेत रेफर गर्नुपर्ने समस्या उत्पन्न भएको छ ।
उपचारका लागि अञ्चल अस्पताल पुगेका तुलसीपुर ५ निवासी ७२ वर्षीया बिमला लम्साल र तुलसीपुरकै ६९ वर्षीया बेलमती मिजासलाई अस्पतालले तत्कालै अन्यत्र रेफर रगेको थियो । उनीहरू दुवै जना दमका बिरामी थिए । उनीहरू जस्तै अक्सिजन चाहिने र एक्सरे गर्नुपर्ने सबै बिरामी अस्पतालबाट रेफर हुँदै आएका छन् ।
असोज ४ गते परेको चट्याङले अस्पताल हातामा रहेको ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुगेपछि अञ्चल अस्पताल विद्युत विहिन बन्न पुगेको र त्यसले अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट योगराज शर्माले बताए ।
अस्पतालको जेनेटर समेत बिग्रेको हु्ँदा रातको समयमा अञ्चल अस्पताल अन्धकार बन्ने गरेको त्यहाँ कार्यरत एकजना चिकित्सकले बताए । बिजुली बत्ती नहुँदा उपचारमा निकै कठिनाई उत्पन्न भएको र आफूहरूले मोबाईलको उज्यालोले बिरामीको उपचार गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।
आइतबार बिग्रिएको जनेरेटर मर्मत गरिएको भएपनि एउटै जेनेटर रहेकोले २४ सै घण्टा चलाउन सम्भव नहुने हुँदा रातको १० बजेपछि अस्पताल अन्धकार बन्ने गरेको उनले बताए । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती चिकित्सकले बिरामीको उपचार मोबाईलको सहायताले गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
अस्पतालको जेनेटर कम क्षमताको भएको हुँदा साना खालका उपकरण मात्रै सञ्चालन हुने तर ठूला खाले कुनैपनि उपकरण सञ्चालन नहुँदा अस्पतालको सेवा प्रभावित बन्न पुगेको निमित्त मेसु शर्माले बताए । जसले गर्दा अक्सिजन आवश्यक पर्ने बिरामी र एक्सरे गर्नुपर्ने बिरामी बाहिर पठाउन अस्पताल बाध्य भएको उनले जानकारी दिए ।
यसैबीच अञ्चल अस्पतालको एक्सरे मेसिन बिग्रिएको समेत झण्डै एक हप्ता पुगिसकेको छ । अस्पताल प्रशासनका अनुसार बिग्रेको एक्सरे मर्मतको लागि राजधानीबाट प्राविधिक बोलाएको भएपनि आइनपुगेको जानकारी अस्पताल प्रशासनले दिएको छ । तर अस्पताल जस्तो संवेदनशील स्थानमा बिग्रेको टान्सफर्मर, जेनेटर, एक्सरे मेसिन एक हप्ता सम्म पनि मर्मतका लागि पहल नगर्नु अस्पताल प्रशासनको ठूलो लापरवाही रहेको ती चिकित्सकले बताए ।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष विष्णुकुमार देवकोटालाई उक्त सवाल सोध्न खोज्दा आफू काठमाडौंमा रहेको हुँदा एक्सरे बिग्रेको बारेमा जानकारी नभएको बताए । तर उनले चट्याङबाट क्षति पुगेको टान्सफर्मर तत्काल मर्मत गर्नका लागि आग्रह गरिसकेको जानकारी दिए ।
‘फिडरलाईन जडान गर्दा अस्पताल हातामा रहेको विद्युत ट्रान्सफर्मरमा चार गते परेको चट्याङले मोनिटर बिग्रिएको र त्यो मर्मतका लागि एक लाख ४९ हजार रुपैयाँ लाग्ने स्टीमेट विद्युत प्राधिकरणले गरेको हुँदा उक्त रकम आज जम्मा गर्ने तयारी गरिएको अस्पताल प्रशासनले जानकारी दिएको छ’ अस्पतालका लेखा अधिकृत सोमराज डाँगीले भने । तर, बिग्रिएका उपकरण कहिले मर्मत हुन्छन् र कहिलेदेखि बिरामीले ती सेवा पाउँछन् भन्ने सवालमा अस्पताल प्रशासन केही जवाफ दिन सकेन ।
एक वर्ष पहिले डा. भोलाराम श्रेष्ठ मेसु रहँदा झण्डै ८० लाखको लागतमा स्थापना गरिएको अक्सिजन प्लाण्ट फूलफेजमा सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने हो भने अस्पतालको लागि प्रर्याप्त अक्सिजन उप्पादन गरेर बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाहरूको लागि समेत अक्सिजन विक्री गरेर अस्पतालले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । तर हालसम्म अस्पताल विकास समितिले बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अक्सिजन विक्री गर्ने सवालमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।
अस्पतालका प्रशासन शाखाका नायव सुब्वा नबेन्द्र गिरीले अञ्चल अस्पतालले दैनिक १२ वटाभन्दा बढी सिलिण्डर बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई विक्री गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताए । तर, दूर्भाग्य अञ्चल अस्पतालले हालसम्म उक्त फिडर लाईनलाई फूलफेजमा सञ्चालन गर्न नसक्दा आफ्नै लागि समेत पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन उत्पादन गर्न सकेको छैन । उनले सिमेण्ट उद्योगहरूलाई दिएर बचेको विद्युत तुलसीपुर क्षेत्रमा आउने हुँदा लो भोल्टेजको मारमा अस्पताल पर्दै आएको बताए ।
डाईलासिस, आईसीयू, एनआईसियू सेवा अझै सञ्चालन भएनन्
अस्पतालमा एक वर्ष अघि फिडल लाईन जडान गरिएको भएपनि त्यो नाम मात्रैको रहेको हुँदा भनेजति अक्सिजन उत्पादन गर्न समस्या भएको अस्पतालका लेखा अधिकृत सोमराज डाँगीले बताए । ‘फिडरलाईन नाम मात्रैको छ, जतिबेला पनि बत्ती झ्याप्प झ्याप्प गइरहन्छ’ डाँगीले भने ‘मुख्यगरी यही बत्तीकै कारणले डायलसिस सेवा हालसम्म सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।’ डा. भोलाराम श्रेष्ठकै पालामा अञ्चल अस्पतामा डाईलासिस, आईसीयू, एनआईसियूका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरणहरू ल्याइएको थियो । तर, ती सेवा हालसम्म सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा उपकरण त्यसै थन्किएका छन् ।
एकवर्षदेखि प्रमुख विहिन अस्पताल
आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र उपकरण भएतापनि सबै सेवाहरू सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण भने आवश्यक जनशक्तिको अभावलाई नै मान्ने गरिएको छ । अञ्चल अस्पताल झण्डै एक वर्षयता मेसु विहिन छ । मेसु सहित जनरल फिजीसियन, नाक,कान ,घाँटी रोग विशेषज्ञ, छालारोग विशषेज्ञ, बहोस बनाउने विशषेज्ञ, मानसिक रोगका विशषेज्ञ, सर्जन, भिडियो एक्सरे गर्ने विषशेज्ञको हालसम्म अभाव रहेको छ ।
त्यस्तै हाड, जोर्नी सम्वन्धी डाक्टर करारमा कार्यरत रहेका छन् । अञ्चल अस्पतालका लागि ११औं तहको मेसु हुनुपर्नेमा यहाँ हाल ९औं तहकाहरूले अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
एक वर्षदेखि मेसु लगायत सातजना विशषेज्ञ चिकित्सकहरूको अभाव हुनुको प्रमुख कारण भने यहाँका राजनीतिक दल, नागरिक समाज तजा जनप्रतिनिधिहरूको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहुँच नपुग्नुलाई मान्नु पर्ने निमित्त मेसु योगराज शर्माले बताए । ७४ जना दरबन्दी रहेको अञ्चल अस्पतालमा सात जना विशषेज्ञ डाक्टर सहित एकजना अस्पताल नर्सिङ प्रमुख, एकजना नर्सिङ अधिकृत, स्टाफनर्स चार जना, एकजना सहायक हाउस किपर र वरिष्ठ ल्याब टेक्लोलोजिष्ट एकजनाको अभाव रहेको छ ।
वर्षौदेखि रिक्त रहँदै आएका ती पदहरू परिपूर्ति गर्ने सवालमा यहाँका अधिकारकर्मीदेखि उद्योगी व्यापारी, अस्पताल विकास समिति, नव निर्वाचित जनप्रतिनिधी, यसक्षेत्रका सांसद कसैको पनि सकारात्मक भूमिका नदेखिएको एकजना चिकित्सकले बताए ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असोज ८, २०७४, ०३:३१:३५